Ziziphi izixhobo ezihamba phambili ze-Amazon zokuthengisa zonyaka?
Impumelelo yexesha elide kule nqanaba elikhuphisanayo lokuthumela izithuthi liya kuhlala lifuna ukuba ube nomzila opheleleyo kunye nolawulo lwezinto eziphambili zokubala uluhlu lwemveliso yakho njengokwenkcenkceshela, ukukhangisa, ingxelo, intengo, iintlawulo, ukulungiswa kohlu, njl njl. Nantsi ezinye zezona zixhobo ezihamba phambili ze-Amazon zokuthengisela abantu bakho kuphela ukuba zenze izinto zibe lula kodwa zifumane inzuzo enkulu kwiimarike ezikufutshane. Izixhobo ezilandelayo kunye nezikhokelo ze-intanethi mhlawumbi zenza ngokufanelekileyo - mustela croute de lait. Ndagqiba kwelokuba ndiluhlule ngohlobo lwabo lokusebenza. Ndiyakholwa ukuba aba ncedisi be-intanethi kufuneka babe nayo yonke imveliso yomthengisi wexesha eliphambili.
10 I-Best Amazon Seller Tools Okwangoku
Ixabiso liyinxalenye ebalulekileyo ekukhuphiseni kwakho, kunye nehlabathi lanamhlanje elitshintshayo ukuguqulwa kweemarike eziqhubekayo ngokuqinisekileyo kufuna ukulandelwa okufutshane kunye nokubeka iliso. Ndiyincoma ukusebenzisa i-RepricerExpress, kuba ngokwenene phakathi kwezona zixhobo zithengisa kakhulu ze-Amazon, ubuncinane xa kuziwa kwixabiso lokukhuphisana. Ngeli sixhobo, unokukwazi ukulobala ngokulula kwaye ulungelelanise amaqhinga akho angoku kunye nexesha elide. Unokufumana inzuzo kwimithetho ethile yemidlalo ephambili, usethe imilinganiselo ephezulu kunye neyezantsi, uqinisekisa umgama wakho olindelekileyo ngexesha elifanayo. I-RepricerIngxelo iyakusindisa ixesha elininzi, ngenxa yokungenisa ngobuninzi kunye nobunzulu obuphenyweyo, kunye neempendulo ezifumanekayo zokusebenzisa nayiphi na inguqu kwixabiso lakho langoku.
Olunye ukhetho phakathi kwezixhobo zokuthengisa ezilungileyo ze-Amazon zokujonga nokunyuka kwexabiso lokuthengisa kwakho kwinqanaba, iCamelCamelCamel inokubukeka iphosa ngokujonga kuqala. Kodwa isebenza ngokwenene! Yenza konke ukulungiswa kwemilinganiselo kwi-process elula kunye neyobuchule ngokuchonga kwangoku-time, izilumkiso kunye nezibuyekezo - kunye nesicelo sesiphequluli se-Chrome esitholakalayo phantsi kwegama leCamelizer kuya kwenza izinto zibe lula.
Ukuphendula kunye nokwaneliseka kwabaxhasi bekuyeyona nto ibaluleke kakhulu kwimpumelelo ye-ecommerce, kodwa ngoku ukuvavanywa kwabathengi abaninzi abonwabileyo kuya kubalelwa kwisilinganisi semitha kwi-Amazon. Kuthetha ukuba ukunganeliseki komthengi akunakwenza izinto zibe zibi nakakhulu kumsebenzi wakho wokuthutha kodwa ungenza ukuba uluhlu lwemveliso yakho luye lwaye lwaba luhlu olungabonakali ngabaninzi abanokuthenga. Kwaye yilapho i-Feedback Express isebenza. Xa kuziwa kulawulo lokunxibelelana kunye nokuzenzekelayo, yinto enye yezona zixhobo ezihamba phambili ze-Amazon. Akuyi kukunika kuphela uqaphelo kuwo wonke uhlalutyo lwabaxhasi bamanani ukuze unako ukunciphisa naluphi na ukuphazanyiswa kokwenza kwakho kodwa lunceda kakhulu xa kuziwa ekuthumeleleni abathengi bakho batsha banokubakho ukuhlaziya okulungileyo.
Umba wezimali uhlala uhamba ngokuhambelana nokuqhuba ibhishini, ngokukodwa ukulungiswa kwamancinci. Kwaye iiprojekthi ze-ecommerce zokuthumela i-drop-down are not exclusions over there..Ukubonelela ngemali kubathengisi be-intanethi I-Kabbage yinsindiso yangempela yokufumana imali eninzi efunekayo yokusebenza. Esi siseko sivavanya ukusebenza kweshishini lomthengisi osebenzayo ukuze ancedise ukujonga idatha efunyenwe kwiimarike ezahlukeneyo ngaphandle kwee-Amazon kunye neendawo zokurhweba ukunikezela isisombululo sezimali esilungileyo esilungelelanisa iimfuno zorhwebo lokuthumela amaninzi kunye nee-ecommerce.
Le software ingakunceda ukwenza izinto zibe lula ukukhuphela iilayezo zabaxhasi ngqo kwiivenkile zakho ze-intanethi kwaye uzibonise ngendlela esebenzayo. I-ShipWorks iphakathi kwezixhobo zokuthengisa ezilungileyo kakhulu ze-Amazon xa kufuneka usebenze kwii-invoyisi zakho, ukunika ingxelo, ukukhankanywa kwe-imeyile, kunye nezinye izinto ezahlukeneyo onokuzifumanisa kakhulu ukuba zonke izinto zenzeke emva kokusebenza kwempumelelo nganye.
Ukuba uqhuba iiprojekthi ezininzi zee-ecommerce, i-CurrenciesDirect iYA KUYA kusebenza kwi-intanethi yakho, ukuba awufuni libale malunga nayiphi na ingxaki ngokulawula inani lee-akhawunti zebhanki zendawo. Awazi ukuba yintoni echanekileyo yileyo manani, kodwa ngokuxhomekeke kwindlela esetyenziswayo ngokutsha, le sixhobo lokulungisa intlawulo inakho ukugcina into engama-3% emali yakho yentengo - nje kuphela ekusebenziseni imisebenzi eyiyo kuphela kunye nezindleko zokutshintshela imali kunye nosuku ngalunye.
Ndiyincoma ukukhetha phakathi kweMarchant Words kunye neThuluzi leNgcaciso yeGoogle njengoko zizona zixhobo ezihamba phambili ze-Amazon zihamba ngendlela eya kwi-ecommerce shishini. Ukukunceda ngokucwangcisa udidi lweemveliso, i-Merchant Words i-keyword ithuluzi lihlanganisa ngaphezulu kwezigidi ezingama-20 zezivakalisi eziphambili ezikhethiweyo ezisetyenziselwa i-Amazon ukuze zithengiwe nsuku zonke. Ngokubhekiselele kwisixhobo segama elingundoqo nge-giant search world, ibonisa amanqabileyo akhe anamandla ngokukodwa ngamanqaku angundoqo amagama afanelekileyo kwizihloko zemveliso kunye nenkcazelo yemveliso.
Ukukhangela iimveliso ezintsha ezithengiswayo kunye nokuhlola amathuba amatsha amashishini angenakulinganiswa kuwo wonke umthengisi we-intanethi. Kodwa xa uvakalelwa kukuba unqongophala wokujonga amathuba okushishino akho kwi-Amazon, i-Incit Sourcing ingakunceda ngengcamango engqondweni kwaye ikubonise uluhlu lweendawo ezinokuthenjwa eziphezulu zokufumana uluhlu lwemveliso ukuze ungene.
Yiyo ke, kungabonakala kungekho-brainer, kodwa kusetyenziswa iiplatifomu ezithandwayo zentlalo efana ne-Facebook yindlela ephezulu yokuqhuba ukuhamba kweendlela kwiintengiso zakho zohlobo lwe-ecommerce - ngaphandle hlawula i penny. Konke okufunekayo kukutyalomla ixesha lokudala iphrofayili enxulumene nezoshishino. Ngaloo ndlela, xa usakha iphepha lakho le shishini, sebenzisa izivakalisi ukuphakamisa iimveliso zakho kwaye ube soloko uphezulu kwiziko lokukhangela. Yintoni eyakhayo-ukwakha ubungqina obuqinileyo kwimidiya yoluntu kunye nokuthunyelwa kwimihla ngemihla kunye nemisebenzi yokuthetha, unako ukujongana nabaphulaphuli abajoliswe ngokuchanekileyo ngabathengi abanakho.
Umphathi weeRefunds uphakathi kwezixhobo zokuthengisa ezilungileyo ze-Amazon xa kuziwa ngamanye amaxesha iimpazamo ezingenakwenzeka okanye iimbuyekezo ezingalindelekanga ezivela kubathengi, umzekelo, ngenxa yesaziso esonakalisiweyo okanye nayiphi na indleko , njengemirhumo yekhomishini, ubungakanani, kunye nemirhumo yesisindo, kunye nayiphina imonakalo okanye iingxaki ezenzekayo endleleni. Sebenzisa iMenenja yokubuyisela imali ukugcina zonke izinto ezibuhlungu zenzeka kwindlela kwaye ukhohlwa malunga neengxaki ezilandelayo kunye nokubuyisela kwakhona.